54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960
29 August, 2012 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Waxaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho damashaad iyo farxad lagu soo dhaweynayo gudoooka cusub ee barlamaanka iyadoo ey bar bar socod kulamo goni gooni ah oo ey leeyhiin beelaha Hawiye iyo daarood oo ku faraxsan Dhagarqabaha JAwaari oo Afarta san
Waxaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho damashaad iyo farxad lagu soo dhaweynayo gudoooka cusub ee barlamaanka iyadoo ey bar bar socod kulamo goni gooni ah oo ey leeyhiin beelaha Hawiye iyo daarood oo ku faraxsan Dhagarqabaha JAwaari oo Afarta sano ee soo socoto dib u dhigay beelweynta digil iyo mirifle,
Waxaa Nasiib Daro Ama wax laga xumaado Ah in Beelaha Digil iyo Mirif Markasta loo dooro Jagadan Halka Beelaha Kale ey ku Hardamayaan MAnsabka ugu sareeya Dalka Sida Raisal Wasaaraha iyo Madaxweynaha,
Waxaa Wax Alga xumado ah in mudo dhan52 Sano eey Beesha Digil iyo Mirifle taagnaanto Markii Dalka Somaliya uu qaatay xuradiisa waloow dadaal fara badan iyo galangal muuqda uu sameeyay Mudane Sharif Xassan Shekhi Aadan
Waxaa Xusuus Mudan Intaariikhda Digil iyo Mirifle eey tahay soo jireen iyadoo ey jiraan dad u sacab tuma qowmiyadaha kale ee somalida iyo ku fushada danahooda Dibna u dhoga danaha Qowmiyada Digil iyo Mirifle
Waxaan la ilaawi Karin hadal uu hada kahor Ku yiri konel Xassan Mohamed Nuur Shaati Guduud markii uu ocday Shirkii Carta Sanadku Markuu ahaa 2000 oo haatan laga joogo mudo 12 sano ah hadalkaas oo ahaa Beelaha Daarood iyo hawiye waxey nagu calaameynayaan Gudoonka Barlamaanka mana aqbaleyno in ad nala mid ah ay anagu meel noo calaameeyaan ayuu yiri waagaasi shaati gaduud.
Digil iyo Mirifle maanta in aaso dad ayaa u arka horumar iyagoo fiirinaya shakhsi ay neceb yihiin ama xoogaa jago siyaasadeed ay doonayeen ay ka waayeen. Jawaari haddiiba uu yahay qof u qalmo Afhayeenka Barlamaanka maxay tahay sababta uu u garan waayey wixii ay garteen Jurriile, Dhuxulow, iyo C/Waaxid Goodax oo aheed inaan la burburin danaha beeshooda sidaas darteedna ay ka tanaasuleen.
Digil iyo Mirifle haddiiba aqoon ay wax tareyso maanta waa taan u joogno oo aqoonyahankeena u shaqeynaya dano qabiilo kale ama laga dhiginayo jaranjaro, aniga waxaan u arkaa xilka loo doortay Jawaari inuu yahay mid dan u ah Hawiye iyo Daarood waana kuwa ku dadaalay inuu soo baxo halka Digil iyo Mirifle dib u dhac weyn ay ku tahay la arki doonee sida xaalka uu noqdo "DAMEER IYO NINKA SAARAN DEYMAA IGA DEEQDO".
Halkaan ka Daawo Hadalkii Wagaasi Shaati gaduud Yiri Halkaan ayadoo Muuqaal ah:-
Waxaa is weydiin mudan Dhalinyerada , Aqoonyahanada, DM in odoyaasha waqtigooda dhamaadey markasta ay noo jabiyaan qowmiyadaha kale ayagoo fulinaya Danaha siyaasadeed ee beelaha kale islamarkaana duugaya tan qowmiyada ay kasoo jeedaan ayagoo ka doorbidaya shilimaad yer oo jaabka loogu shubo.
Madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyay Maxaabiis u xirneyd Burcad Baddeednimo
Maxaa looga hadlay kulankii Maanta ee Golaha Aqalka Sare?
Maxaa looga hadlay Shirka Golaha Wasiiradda?